योनी चियाउँदा देखिएको कुरुप समाज — KhabarTweet
योनी चियाउँदा देखिएको समाज वास्तवमै ‘भयानक’ छ। स्वयम् आफ्नो मात्रै नभएर सम्पूर्ण परिवार समाजकै इज्जतको भारी बोकेर दोब्रिएको उल्टो त्रिभुजाकारको योनी समाजको कुरुप अनुहार उतार्न पर्याप्त छ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र २१, २०७७ समय: ९:०५:०७
२६, वैशाख २०७७ । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका– १० शान्तिनगरकी ९ वर्षीया बालिकालाई १४ वर्षीय स्थानीय बालकले मार्ने धम्की दिंदै यौनाङ्गमा जबरजस्ती कोदालाको बिंड घुसारिदिए। जसका कारण उनको यौनाङ्ग र मलद्वारमा गहिरो चोट लाग्न पुग्यो।
“आखिर १४ वर्षीय बालकले आपसी रिसइबी साध्न र आफ्नो वर्चस्व जताउन ती बालिकाको योनी नै किन रोजे रु” चिकित्सा मानवशास्त्री सचिन घिमिरे यस प्रश्नको पहेली फुकाउँदा नै हाम्रा पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रहहरू खोतलिने बताउँछन्।
उद्धारपश्चात् मनोपरामर्शकोमा पुर्‍याइएकी ती महिलाले भनिन्, “यौनसम्पर्क गर्दा योनी सधैं दुख्न, पोल्न थालेपछि मैले श्रीमान्‌लाई यौन सम्पर्क गर्न दिइरहेकी थिइनँ।” एकाएक शरीर भारी लाग्ने, अकारण डर लाग्ने, केटा मान्छे देख्यो कि झर्को लाग्ने हुन थालेपछि उनले श्रीमान्‌लाई शारीरिक सम्बन्ध गर्न निषेध गरेकी रहिछन्। पटक–पटकको निषेधलाई श्रीमान्‌लाई अरू केटासँग लागेको ठहर्‍याउँदै दिनहुँ टोकसो गर्न थालेपछि ती महिलाले बाध्य भएर आत्महत्याको प्रयास गर्न पुगेको बताइन्। भारतको आसामस्थित गुवाहटीमा रहेको कामरुप कामाख्या विश्वको सर्वश्रेष्ठ योनी पीठ हो जहाँ सतीदेवीको योनी पतन भएको मानिन्छ।
केही वर्षअघि मकवानपुरमा पाठेघर खसेर बिचल्ली भएकी एक महिलालाई अनुनयविनय गरेपछि उपचारका लागि शिविरमा ल्याउन सफल भएकी डा।अरुणा उप्रेतीको यस्तै तीतो अनुभव छ। खसेको पाठेघरको सफल उपचारपश्चात् स्वस्थ शरीर लिएर प्रसन्न मुद्रामा ती महिला घर फर्किन्। तर घर फर्कंदा उनको खुशी भने लुटिए जस्तै हुनपुग्यो। जसै उनी घर पुगिन् उनको श्रीमान्‌ले जो पायो त्यहीलाई आफ्नो गुप्ताङ्ग देखाउने भन्दै कुटपिट गर्न थाले। यो घटनाको स्मरण गर्दा डा। उप्रेती अहिले पनि अवाक् हुन्छिन्।
काठमाडौंकी एक महिलाले आफ्नो श्रीमान्‌द्वारा पाएको परिभाषा यस्तो थियो– ‘ग्याटिस गएको मोजा कहिल्यै देख्नुभएको छ रु मलाई उसको योनी ठीक त्यस्तै लाग्छ।’ आफूलाई श्रीमतीसँग यौन सम्पर्क गर्दा सन्तुष्ट नहुनाले परस्त्रीमा लाग्न बाध्य भएको ती पुरुषले मनोविद् कुँवरसमक्ष सुनाए। शारीरिक सम्बन्धको बखतमा मात्रै नभएर सधैंजसो घरझगडा हुन थालेपछि अनिंदोपन र डिप्रेसन भएर मनोपरामर्शमा आएकी ती महिलाले श्रीमान्‌ले भिराइदिएको योनीको परिभाषालाई शिरोधार्य गर्दै बच्चा पाएपछि आफू ‘झुत्री’ भएको हुनसक्ने बताइन्।
महिलाका योनी बारे व्याप्त यस्ता भ्रम भत्काउन जरूरी भएको स्त्रीरोग विशेषज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। जैविक विज्ञान भन्छ– ‘मांसपेशी स्वतस्फूर्त खुम्चने र तन्कने गर्दछ। चाहे त्यो योनीको मांसपेशी होस् या लिंगको। बच्चा पाउँदैमा यो खुकुलो हुने र नखुम्चिने भन्ने हुँदैन।’ मांसपेशीको धर्म नै खुम्चनु र तन्कनु हो। त्यसो त महिलाको ‘क्लिटोरिस’मा आठ हजार नसाका रेसाहरू ९पुरुषको तुलनामा दुई गुणा बढी० पाइन्छ जसले मांसपेशीलाई आवश्यक रूपमा लचिलो बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ।
डेढ वर्षअघिको कुरा हो। महिलाहरूको एक अनौपचारिक भलाकुसारीमा योनीको कथित मापदण्ड सुनेपछि जोरपाटी, आरुबारीकी एक ४५ वर्षीया महिला हतास हुन पुगिन्। उनले सुनेको मापदण्ड थियो– ‘बच्चा पाएपछि महिलाको योनी खुकुलो हुनाले लोग्नेमान्छे परस्त्रीमा लाग्न बाध्य हुन्छन् १’ गफ सुनेपछि घरमै बेथा लागेर छोरा पाउँदा आफ्नो योनी केही च्यातिएको हुनसक्ने आशंका एकाएक उनले छोरा पाएको १८ वर्षपछि गरिन्। घरमा श्रीमान् नभएको मौका पारेर उनले अस्पताल गई आफ्नो योनी सिलाइन् (भजाइनोप्लाष्टी गरिन्)। स्टिच गरिएकोे ‘टाइट’ योनीप्रति श्रीमान्को प्रतिक्रिया कस्तो होला रु उनले मीठो अनि भीमकाय कल्पना गर्न थालिन्।
एक हप्तापश्चात् श्रीमान् घर फर्किए। तर ‘बेड’मा उनको प्रतिक्रिया खास फरक भएन। पुरानै अनि सामान्य प्रतिक्रियाले उनी हतास भइन्। त्यसपश्चात् उनले श्रीमान्लाई शंका गर्न थालिन्। कपोलकल्पित रूपमा शंका गर्ने बानीले उनमा एन्जाइटी, ‘एटेन्सन सिक’ गर्ने बानी बसेपछि उनी मनोविद् गंगा पाठकसमक्ष प्रश्न लिएर उभिइन्– ‘जाडोमा डिप्रेसन बढी हुन्छ रे, हो मिस रु’
‘भारतको आसामस्थित गुवाहटीमा रहेको कामरुप कामाख्या विश्वको सर्वश्रेष्ठ योनी पीठ हो जहाँ सतीदेवीको योनी पतन भएको मानिन्छ। तर योनी पूजाको इतिहास बोकेको देशरसमाजमा योनीहरू किन प्रताडित भइरहेका छन् रु योनीलाई किन बुझ्ने प्रयास भइरहेको छैन रु संभवतः आजको समाज र महिला अधिकारको पक्षमा जवाफ खोजिनुपर्ने गरिका केन्द्रमा रहेका प्रश्न हुन् यी।
कौलमार्गको उत्पत्ति नै कामरुप कामाख्यामा भएको मानिन्छ। संस्कृतिविद् डा।जगमान गुरुङ भन्छन्, “काठमाडौंका नेवारहरूलाई कौलमार्गी भनिन्छ। उनीहरूले गर्ने मच्छिन्द्रनाथको पूजालाई चक्र पूजा अर्थात् योनी पूजा भनिन्छ।” त्यस्तै गुह्येश्वरीमा रहेको छिद्रलाई पनि योनी पीठ मानिन्छ र छिद्र माथि कलश राखी पूजा गर्ने गरिन्छ।
यसरी योनी पूजाको इतिहास बोकेको देश÷समाजमा योनी पुजारी भने आखिर किन भेटिंदैनन् त रु योनीहरू किन प्रताडित भइरहेका छन् रु योनीलाई किन बुझ्ने प्रयास भइरहेको छैन रु संभवतः आजको समाज र महिला अधिकारको पक्षमा जवाफ खोजिनुपर्ने गरिका केन्द्रमा रहेका प्रश्न हुन् यी।
“म मेरी १८ वर्षीया छोरीलाई प्रत्येक वर्ष उसको जन्मदिनमा ‘भर्जिनिटी टेस्ट’ गर्न स्त्रीरोग विशेषज्ञकोमा लैजान्छु”, चर्चित अमेरिकी र्‍यापर टी।आई ९क्लिफोर्ड ह्यारिस० ले लोकप्रिय पडकास्ट ुलेडिज लाइक असु मार्फत गत वर्ष नोभेम्बरमा यस्तो उद्घोष गरे। जसले गर्दा उनको सर्वव्यापी विरोध भएको थियो। वास्तवमा एक बाबुले आफ्नी छोरीको ‘चरित्र’ बुझ्नका लागि गरेको यो प्रयासबाट नै हामी योनीको कम र हाम्रो बुझाइको धरातल बढी मापन गर्न सक्छौं। हिन्दू धर्ममा पूजा गरिने शिवलिंग यसको तलको जलहरी योनी हो। तस्वीरः गेट्टीइमेजेज्
वास्तवमा योनी जीवनको शुरूआत हो। तर जीवन शुरू हुने योनीबाट खुशी किन अन्त्य भइरहेछन् ? प्रत्येक जीवन महिलाको योनी यात्राबाट पार हुँदै यस धर्तीमा अवतरित हुने गर्दछ। यस अर्थमा हेर्दा महिलाको योनी प्रत्येक मानिसका लागि उद्गमस्थल हो। योनी उर्वरता र प्रजनन्‌को प्रतीक हो।
नौ वर्षअघि भारतमा महिलाको यौनांग गोरो तथा टाइट बनाउने भन्दै ‘एट्टिन अगेन’ नामक जेलरक्रिमबारे प्रसारण भएको एक विज्ञापन निकै विवादित बन्न पुग्यो। ‘फिल्स लाइक अ भर्जिन’ ट्यागलाइनसहितको उक्त ६० सेकेण्डको विज्ञापनमा श्रीमतीले यौनांगमा क्रिम प्रयोग गरेको संकेत दिने बित्तिकै श्रीमान् कामुक भई उनलाई प्रेम गर्न थाल्छन्। पुरुषलाई सन्तुष्टि दिनका लागि के महिलाको अनुहारदेखि गुप्ताङ्ग समेत गोरो र आकर्षक हुनैपर्ने हो ?
आखिर गुप्ताङ्ग भनिएको योनीको मापदण्ड कसले निर्धारण गरिदियो रु आकर्षक योनीका लागि मापदण्ड के हो ? योनी कस्तो हुनुपर्छ ? आखिर यो केको मापदण्ड हो ?
महिलाको शरीरलाई उपभोक्तावादसँग जोडेर योनी बारे यस्ता भ्रामक सूचना फैलाउँदै उसको योनीलाई समेत वस्तुकरण गरी निर्धारण गरिएका घोषितरअघोषित मापदण्डहरूले हाम्रो समाज र समझ दुवैको संक्रमण देखाएको चिकित्सा मानवशास्त्री सचिन घिमिरे बताउँछन्।
योनी चियाउँदा देखिएको समाज वास्तवमै ‘भयानक’ छ। स्वयम् आफ्नो मात्रै नभएर सम्पूर्ण परिवार समाजकै इज्जतको भारी बोकेर दोब्रिएको उल्टो त्रिभुजाकारको योनी समाजको सुल्टो अनुहार उतार्न पर्याप्त छ। योनीको समाजशास्त्रीय अध्ययनले यही भन्छ।
महिलाहरू आफ्नो यौनाङ्ग, यौनिकता र यौनबारे के सोच्छन् ? के भन्छन् ? स्वेच्छाभन्दा धेरै पर दबाबले दबिएका महिला पुरुषबाट आखिर कस्तो प्रेम, सद्भाव र व्यवहारको अपेक्षा राख्छन् ? उनीहरूलाई के गर्दा र के नगर्दा सहज हुन्छ ? के हामीले कहिल्यै सोचेका छौं ? के हामीले कहिल्यै योनीको ध्वनि सुनेका छौं ? साभारःहिमालखवर